अहिलेसम्मकै दुर्लभ ग्रहण भोली लाग्दै, ग्रहण लाग्दा कुन राशिलाई कस्तो असर पर्छ त ?
९ पुस, काठमाडौँ । बिहीबार बिहान करिब पौने ३ घण्टा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ । यो ग्रहण बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटमा लागेर बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा सकिने नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
सूर्यग्रहणको सूतक भने आज राति बुधबार करिब राति ८ बजेर ४२ मिनेटदेखि नै बार्नुपर्ने र यस समयमा गर्भवती, बच्चा, रोगी र ज्येष्ठ नागरिकले भोजन गर्न नहुने समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतम बताउँछन् ।
बिहीबार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटमा ग्रहण सुरु भएर ११ बजेर ३१ मिनेटमा पूर्णरुपमा ग्रहणले छोड्ने छ । उक्त ग्रहणको अबधि २ घण्टा ४९ मिनेट सम्म रहने छ ।
करिब ६ वटा ग्रहहरु एकैस्थानमा रहेर लाग्न लागेको ग्रहण हुनाले पनि भोलीको ग्रहणलाई विशेष रुपमा हेरिरहेको छ । यो एकदमै दुर्लभ खगोलिय घटना हो । मूल नक्षत्र तथा धनु राशिमा लाग्ने यस ग्रहणको विभिन्न राशिमा पनि यसको प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।
खगोल वा ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहण भन्नाले एउटा आकाशीय पिण्डको छायाँले अर्को आकाशीय पिण्डलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा छेकेर अन्धकार बनाइदिनु भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतयः सूर्य र चन्द्र बिम्बमा देखिने अन्धकारमय अवस्था नै ग्रहण हो । ग्रहण औंसी र पूर्णिमामा लाग्छ । सूर्यग्रहण औंसीमा लाग्छ भने चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा लाग्दछ ।
यी राशिले हेर्न हुन्छ ग्रहण
बिहीबारको सूर्यग्रहण विशेषगरी धनु, बिश्चिक, कन्या, सिंह,मकर, वृष, मेष मिथुन, राशिमा जन्मिएका मानिसका लागि नकारात्मक असर पर्ने हुँदा सावधानी अपनाउन र ग्रहण नहेर्दा राम्रो हुन्छ । कर्कट तुला, कुम्भ र मीन राशि हुनेहरुका लागि भने विषेश फाइदा रहने पनि ज्योतिषशास्त्रले बताएको छ ।
यो खण्डग्रास सुर्य ग्रहण हो । ग्रहण प्रकृतिका लागि अद्भुत चमत्कार एक खगोलीय घटना हो ।
यस समयमा विशेषगरी गर्भवती, बच्चा, रोगी र ज्येष्ठ नागरिक ग्रहणको समय खुल्ला आकाशमा निस्किन नहुने बताइएको छ । ग्रहण लाग्नु करिब १२ घण्टाअगाडिबाट भोजन गर्न नहुने र कुनै पनि शुभकार्य र पूजा गर्न नहुने शास्त्रीय मान्यता छ ।
ग्रहणका समय आटा, चामल, चिनी, दाल आदि दान गर्दा राम्रो हुने जनविश्वास छ । ग्रहणको नराम्रो प्रभावबाट बच्न दुर्गा चालिसा या श्रीमद्भागवत् गीता पाठ गर्नु उत्तम हुने शास्त्रमा वर्णित छ ।
ग्रहण लाग्दा के के गर्नु हुँदैन ?
ग्रहण लागेको समयमा खाना तयार गरिएको छ भने त्यसलाई नखानुहोस् । ग्रहणको समयमा खाना खानु हुँदैन भन्ने शास्त्रमा उल्लेख द्ध । यदि खाना बाँकि रहेको द्ध र ग्रहणको समयमा परेको छ भने उक्त खाना पनि नखानु नै राम्रो हुन्छ ।
ग्रहण समयमा पूजा गर्नु हुँदैन । तर मन्त्र भने जप्न सकिने शास्त्रमा उल्लेख छ । ग्रहणका बेला ऊँ नम ः शिवाय, श्रीराम, सीताराम, ऊँ रामदूताय नम : आदि मन्त्र जप्न सकिन्छ । साथै ग्रहणको समयमा पूजा पनि गर्न हुँदैन ।
ग्रहण लागेका बेला गर्भवती महिला बाहिर जानु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा बाहिर जाँदा बच्चामा खरब असर गर्ने मान्यता रहिआएको छ । ग्रहणको समयमा विभिन्न खराब किरणहरू उत्पन्न हुने हुँदा यसकोअसर सिधा बच्चामा पर्दछ । ग्रहणको समयमा वातावरणमा समेत नकारात्मक किरणहरू पैदा हुने हुँदा घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो मानिन्छ ।
कुन राशीमा कस्तो असर पर्छ त सूर्यग्रहणको ?
मेष-मेश राशि भएका मानिसहरुका लागि सुर्य ग्रहण काममा रुकावट आउनुका साथै सन्तानमा पीडा हुन सक्छ । धनको हानीको सम्भावना समेत भएको बताइन्छ । मेष राशि हुनेहरुले विहानको समयमा रातो आसनमा बसेर पूजा गर्ने तथा मीठाइजन्य खानेकुरा दान गर्न ज्योतिषशास्त्र सुझाव दिन्छन् ।
वृष राशि-वृश राशि हुनेहरुका लागि अचानक चोटपटक लाग्नु तथा आँखाको समस्या बढ्ने बताइन्छ । स्वास्थ्यमा नदेखिने गरी समस्या आउने देखिन्छ । वृष राशि हुनेहरुले आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरुलाई गुलियो खानेकुरा खुवाउनुका साथै ओम घृणि सुर्याय नम ः मन्त्र १०८ पटक जप्नु राम्रो मानिन्छ ।
मिथुन- मिथुन राशि भएकाहरुका लागि दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउने देखिन्छ । सुर्य ग्रहणको असर तपाईको कारोबारमा पनि पर्न सक्छ । सुर्य ग्रहणले मिथुन राशिहरुलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने बताइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले दुःखी तथा गरिव मानिसहरुमा गहुँको खाद्य वस्तु र मिठाइ दान गरेर सुर्यको नमस्कार गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
कर्कट-कर्कट राशि भएकाहरुका लागि सूर्य ग्रहणले काममा सफलता दिनुका साथै धन वृद्धि हुने बताइन्छ । सम्पत्ति वृद्धि हुने तथा फसिरहेको धन फर्काउन सकिने बताइन्छ । यस्ता व्यक्तिले सुर्यनारायणको सूर्याष्टक पाट र गरिव व्यक्तिहरुमा दान दिँदा राम्रो हुन्छ ।
सिंह-सिंह राशि भएकाहरुका लागि सुर्यग्रहणले पेटको समस्या बढाउनुका साथै धन लाभ गराउने योग रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईमा मनमा लागिरहेको विचार अरुसामु सुनाउँदा हानी हुने बताइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले बिहानको समयमा सूर्यको नमस्कार गर्नु राम्रो हुने तथा स्वास्थ्यका लागि सूर्य मन्त्र ओम आदित्याय नम ? मन्त्र जप्नु राम्रो मानिन्छ ।
कन्या राशि – कन्या राशि हुनेहरुका लागि सुर्यग्रहण परिवारमा समस्या बढाउने बताइन्छ । साथै काममा समस्या उत्पन्न हुने र कारोबारमा पनि हानी हुने बताइन्छ । कन्या राशिका व्यक्तिहरुले भगवान गणेशको र सूर्य स्तोत्रको पाठ गर्नुका साथै गरिव तथा दिनदुःखीलाई मिठो खुवाउनु राम्रो मानिन्छ ।
तुला –तुला राशि भएका व्यक्तिहरुलाई सुर्य ग्रहण साथीहरुबाट धोका र आफ्नो बुवाको स्वास्थ्य बिग्रने बताइन्छ । नयाँ घर खरिद गर्ने योग रहेको छ । दाजुभाइ दिदी बहिनीमा मनमुटाव हुने देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिले शिव भगवानलाई सम्झेर १०८ पटक शिव मन्त्र जप्नु राम्रो मानिन्छ ।
वृश्चिक-वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि सुर्य ग्रहण नाता कुटुम्बबीच झगडा बढाउने देखिनुका साथै धनको हानि हुने देखिन्छ । साथै घरमा झगडा बढ्नुका साथै आफ्नो रिशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा हानी हुने बताइन्छ । यस्ता व्यक्तिले बिहान उठेर हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु तथा गरिव तथा दिनदुःखीमा रातो कपडा र मिठाइ दान गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
धनु-धनु राशि हुनेहरुका लागि सुर्यग्रहण स्वास्थ्य विग्रने र चोटपटक लाग्ने देखिन्छ । साथै आयु वृद्धि हुने तथा खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट बच्नका लागि सूर्य भगवानको बाह्र नाममा जप गर्ने र विष्णु चालिसाको जप गर्नु उत्तम हुन्छ ।
मकर- मकर राशि हुनेहरुका लागि सुर्यग्रहण धन खर्च गराउने मानिन्छ । साथै आँखाको समस्या पनि उत्पन्न हुने र अत्यन्तै विवाद बढाउने बताइन्छ । सुर्यग्रहणमा परिवारजनको स्वास्थ्यको राम्रो ध्यान राख्नुपर्ने बताइन्छ । मकर राशिका व्यक्तिहरुले भगवान सुर्यको १०८ नाम जप्ने र गरिव तथा दिन दुःखीहरुलाई खाना खुवाउनु यसको नकरात्मक प्रभावबाट बच्ने सकिने उपाय रहेको बताइन्छ ।
कुम्भ-कुम्भ राशि हुनेहरुका लागि सुर्यग्रहण धन लाभ हुने बताइन्छ । साथै सन्तानको पीडा हराउने र पढाइ तथ रोजगारीको खोजीमा लागेका युवाहरुका लागि सुर्य ग्रहण शुभ मानिएको छ । यस्ता व्यक्तिले सुर्य ग्रहणको नकरात्मक प्रभावबाट बच्नका लागि आफ्नो वजन बराबर सातप्रकारका अन्न दान गर्नुका साथै गरिव तथा दिनदुखीलाई खाना खुवाउनु राम्रो मानिन्छ ।
मीन राशि- मीन राशि हुनेहरुका लागि सुर्यग्रहण कामगर्ने स्थानमा केही न केही परिवर्तन गर्नुका साथै मानशिक समस्या पनि हुन सक्छ । साथीहरुवीच विवादमा पर्न सकिन्छ । यस्ता व्यक्तिले विहानको समयमा रातो आसनमाथि बसेर सुर्यको स्त्रोत्र पाठ गर्नुका साथै गणेश भगवानलाई फ्रूल अर्पित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ– आज यी ६ राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
तपाईको आज (आइतवार) को राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
प्रसिद्ध बिस्का (बिस्केट) जात्रा आजबाट शुरु हुँदै
तपाईको आज शनिबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज कुन–कुन राशिकालाई हुनेछ त विशेष लाभ ?